Thiago Silva Oo Munaafaqnimo Ku Eedeeyay Leo Messi: Markii Uu Garsooraha Ka Hiiliyay PSG Ma Aadan Hadlin - Gool24.Net
Thiago Silva Oo Munaafaqnimo Ku Eedeeyay Leo Messi: Markii Uu Garsooraha Ka Hiiliyay PSG Ma Aadan Hadlin
Thiago Silva ayaa sheegay in Lionel Messi uu muujinayo munaafaqnimo madaama uu ku faraxsanaa in Paris Saint-Germain looga hiiliyo Barcelona kulankii Champions League ee 2017 oo ay Barca 6-1 ku badisay.
Xiddiga Argentina ayaa ku tilmaamay garsoorihii dhexdhexaadinayay kulankii semi-finalka ee ay guuldarada ka soo gaartay mid aan waxba ogeyn, waxaana uu oo jeediyay in musuq maasuq uu ka buuxa xiriirka kubada cagta Latin America isagoo ku eedeeyay in ay u hiilanayeen Brazil oo koobka hanatay xalay.
Daafaca reer Brazil Thiago Silva ayaa ka jawaab celiyay hadalksa Messi isagoo soo jeediyay in Messi uu isagu ku faa’iday go’aanada garsooraha kulankii ay Barcelona 6-1 kaga badisay PSG ee Champions League labo sannadood ka hor.
“Waa ay nagu adag tahay inaan ka hadalno arintaan” ayuu yiri Silva ka dib markii ay 3-1 kaga badiyeen Peru kulankii finalka.
“Mararka qaar marka ay guuldarro ku soo gaarto, waxaad isku dayaysaa inaad ku mashquusho dadka kale.
“Uma maleynayo inuu hadalkaan u yiri naceyb, laakiin kulankii ay guuldarada 6-1 naga soo gaartay Barcelona, waxa u hiiliyay garsooraha feker ahaanteyda, taasoo aheyd wax laga xumaado.
“Laakiin intaan hadalnay ma aanan oran garsooraha ayaa u hiiliyay Barcelona. Waxaan qabaa inay tahay inaad ixtiraam muujiso.
“Brazil shan xiddig oo ku guuleysiga Koobka Adduunka ah bilaa micno uma heysato – midkoodna koobabkaas lama soo xadin. Waxaan ku qaadnay garoonka dhexdiisa.”
Xiddiga ay Silva kuwada ciyaaraan PSG iyo Brazil Marquinhos ayaa hadalkiisa raaciyay: “Messi waa shaqsi fiican, laakiin hadalkiisa waa nasiibdarro, haddii aan nahay ciyaartoyda Brazil ma aanan jecleysan.
“Waxay guuldarro naga soo gaartay Belgium Koobkii Adduunka, sidoo kale qaladaad garsoore ayaa u hiiliyay Barcelona. Ma aanan maqlin isagoo ka hadlay musuqmaasuq waqtigaas.”